I-Horoscope yeLibra: Imihla yokuhambelana neempawu zeLibra Zodiac, iimpawu - Iponti
Ulwazi lweLibra ngeenkwenkwezi x
Kor: Buhlaza oluhlaza
Iplanethi elawulayo: IVenus
Eyona nto ihambelanayo: Gemini, Aquarius
Eyona ilungileyo kuMtshato kunye neNtsebenziswano: Aries
Hlela Amanani: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60
Ixesha elingqinelanayo: NgoSeptemba 23-Okthobha 23
Amanqaku anamandla: Intsebenziswano, ezozakuzo, ezihlekisayo, ezinobulungisa, zezentlalo
Ubuthathaka: Ukungaqinisekanga, ukunqanda ukungqubana, inzondo, idlala ixhoba
ULibra uthanda: Ukuvisisana, ubulali, ukwabelana nabanye, ngaphandle
ILibra ayifuni: Ubundlobongela, ukungabi nabulungisa, ukuthetha phandle, ukuhambelana
Abantu abazalwa phantsi kophawu lweLibra banoxolo kwaye banobulungisa, kwaye bayakuzonda ukuba bodwa. Ubambiswano lubaluleke kakhulu kwiiLibras, kwaye ngengqondo yabo ephumeleleyo kunye nentsebenziswano, abanako ukuzimela bodwa. ILibra luphawu loMoya, olunengqondo ecacileyo kunye nengqondo ebukhali. Baphefumlelwe ngeencwadi ezilungileyo, iingxoxo ezingenakulinganiswa kunye nabantu abanomdla.
Iplanethi elawulayo yeLibra nguVenus, ongumthandi wezinto ezintle, ngoko umgangatho uhlala ubaluleke ngaphezu kobuninzi kubantu abazalwe phantsi komqondiso weLibra. Bahlala bejikelezwe ngobugcisa, umculo kunye neendawo ezintle. Banentsebenziswano ngokwemvelo, ngoko badla ngokusebenza njengeqela.
I-Libra inomdla ngokulinganisela kunye ne-symmetry. Abazalelwe eLibra bakhetha ubulungisa nokulingana, kwaye abanako ukunyamezela intswela-bulungisa. Bayakuphepha ukubandakanyeka kuzo zonke iintlobo zongquzulwano yaye bakhetha ukugcina uxolo nanini na kunokwenzeka. Bathanda ukwenza yonke into kunye kwaye bangabi bodwa.
Ingxaki enkulu yeLibras kuxa benyanzelwa ukuba bakhethe amacala, kuba abanazigqibo kwaye ngamanye amaxesha bayalibala uluvo lwabo.
Uthando kunye nesondo kwiLibra
Ukufumana iqabane elifanelekileyo kuya kuba yinto ephambili ebomini babantu abazalwa phantsi komqondiso weLibra. KumaLibra asele ebudlelwaneni, ukugcina uxolo kunye nokuvisisana yeyona nto ibalulekileyo. Isithukuthezi asiyondalo kwaye buhlungu kakhulu kwiLibra. Njengabathandanayo, bavakalisa, baqulunqa kwaye balinganise. Baya kwenza nantoni na efunekayo ukuze bakholise amaqabane abo. Ubuntu babo obunomtsalane kunye nokuzinikela kwabo kubenza babe ngamaqabane amangalisayo.
Ubuhlobo kunye noSapho eLibra
IiLibra ziyathanda ulonwabo kwaye zihlala zikulungele ukunceda, nto leyo ebenza babe ngabahlobo abakhulu. Basenokuba notyekelo lokulibaziseka kunye nokungazinzi, kodwa bangabahlobo abamangalisayo kwaye wonke umntu ufuna ukuba kwinkampani yabo. Olu phawu lwezodiac oluguquguqukayo luyathanda ukuchitha ixesha kunye nabahlobo kunye nosapho kwaye alulibazisi xa ilixesha lokucwangcisa umhla. I-Libra intlalontle, inothando kwaye iyayazi indlela yokudala indawo ehambelanayo apho aneliseke ngokwenene. Xa kufikwa kwimingeni, iiLibras ziyayazi indlela yokubona isisombululo sokungavisisani, nto leyo ebenza babe ngabasombululi bengxaki ababalaseleyo.
Umsebenzi kunye nemali kwiLibra
KwiLibra, ukugcina ibhalansi kunye nemvisiswano kubaluleke kakhulu. Banokuba ziinkokeli ezinkulu, kwaye baya kusebenza nzima ukuze bafumane kwaye bafanelwe ngamalungelo. Inyaniso nobulungisa buya kuhlala bukhona ekwenziweni kwezigqibo. Ubambiswano okanye intsebenziswano ifanelekile kulo mlinganiswa wentlalo. Abantu abazalwa phantsi kophawu lweLibra nabo bakholisa kakhulu kwaye banetalente.
Imisebenzi ebonisa ubulungisa njengepolisa, igqwetha okanye ijaji lukhetho oluhle kakhulu lweLibra. Banokuba nemisebenzi eyimpumelelo njengoonozakuzaku, abasebenzi bakarhulumente, abayili bangaphakathi, abaqambi kunye nabayili befashoni. Ukusebenza kwiqela akuyongxaki kwiiLibras kwaye ingqiqo yabo eqinileyo yediplomacy iya kubanceda bafezekise phantse nawuphi na umsebenzi.
Ukuba uya kuthenga ngeLibra, eyona nto ingcono onokuyenza kukucwangcisa ixesha elongezelelweyo. Xa kuziwa ekuthengeni, bayathandabuza kakhulu. Banetalente enkulu yokulungelelanisa ukonga kunye nokusebenzisa imali. Bathanda ifashoni kunye neempahla ezilungileyo, ngoko unokuzibona rhoqo kudederhu lweevenkile.
Indlela yokutsala uMntu waseLibra
Mhlawumbi enye yezona mpawu zibalaseleyo zeLibra kukuba abantu abazalwa phantsi kolu phawu bazinikele ekufumaneni izisombululo. Ukuba ufuna ukuhenda indoda yaseLibra, okokuqala kufuneka ukhangeleke kakuhle, njengoko ingumntu ongaphezulu kakhulu. Amadoda aseLibra ayayixabisa yonke into enhle kwaye ayisoze ibe nomntu ongenakufunyanwa ngabanye ekhangayo ngokwasemzimbeni.
Olunye lweempawu ezimbi zikaLibra kukuba abanazigqibo kwaye banenkathazo yokwenza izibophelelo ezinzulu. Indoda ezelwe phantsi kophawu lweLibra ngokuvumisa ngeenkwenkwezi ihlala ikufumanisa kunzima ukwenza izimvo kunye nokuzenzela izigqibo.
Uyakuthanda ukuxoxa ngayo yonke into neqabane lakhe, kodwa nayiphi na incoko enzulu kakhulu okanye eneemvakalelo inokumoyikisa. Uyesaba ukuzinikela kwaye, ubuncinane ekuqaleni kobudlelwane, ufuna ukuziva ulula kwaye ukhululekile. Indoda yaseLibra ayinaziphene zokuthetha, ngoko ke konke okufuneka ukwenze ukuze umlahle kukuthetha naye.
Isitshixo sokuhenda indoda yaseLibra kukugxila ekubeni nomtsalane kunye nokuzithemba. Unecala elinovelwano, ngoko ukuba ubonakalisa uvelwano nokuba sesichengeni, unokukuvumela ukuba ungene entliziyweni yakhe. Nyaniseka kuye kwaye uvume xa uphosisile. Indoda yaseLibra ifuna uthando lokwenene kunye nomtshato, ngoko unokulindela ubudlelwane bokwenene, bexesha elide, kungekhona nje ngesondo.
Indlela yokutsala umfazi waseLibra
Ubuntu beLibra bubangela umdla kakhulu kuba uphawu lwesixhenxe lwezodiac luhlala lubonakala luluninzi lokungavisisani. Abasetyhini baseLibra bathanda ukuba liziko lokuqwalaselwa kwaye balindele ukuphathwa njengeendlovukazi. Eyona nto ibalulekileyo omele uyazi ukuze uhende umfazi waseLibra kukuba kuya kufuneka ube yincoko kunye nomphulaphuli. Uyakonwabela ukufundiswa ngezinto ezintsha kwaye uyathanda ukuthetha ngesiqu sakhe nezinto anomdla kuzo.
Umfazi ozelwe phantsi kophawu lweLibra unomtsalane, ukrelekrele kwaye ujolise kwisisombululo. Ukwabelana ngesondo kuza okwesibini emva kothando lomfazi waseLibra, oko akuthethi ukuba akakho mlilo. Unokuba wonqena uthando, ngoko kuya kufuneka ugcine umdla wakhe uphila. Ukuba ufuna ukumhenda, kufuneka uncome umzimba wakhe, njengoko engadinwa kukuva ukuba uyamangalisa kangakanani. Nangona kunjalo, umfazi ozelwe phantsi kophawu lweLibra unotyekelo lwendalo lokutshintsha kweemvakalelo, ngoko ungalindeli ukuba neentlobano zesini ezilandela ipateni eqhelekileyo.
Enye yeendlela ezilungileyo zokugcina ingqalelo yakhe kukumvumela ukuba abe yinkwenkwezi yobudlelwane. Nika ingqalelo ngakumbi inkangeleko yakho, kuba uLibra ufuna ukuziva ngathi ukunye nomntu ophantse wakhetheke njengaye.
Ukugcina umdla wakhe ngokuqinisekileyo akukho lula, kodwa ukuba uyakhumbula ukumvumela ukuba akhanye kangangoko efuna, uya kuba nethuba elingcono lokuphuhlisa uthando oluqinileyo, oluhlala ixesha elide.
Iimpawu ezihambelanayo iLibra kufuneka ithathelwe ingqalelo: Amawele , Ingonyama , Sagittarius , Aquarium
Iponti Emanzini Aries Leo Gemini